पीडितले राहत नपाए आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छु – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ ब्लग / विचार ∕ पीडितले राहत नपाए आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छु
पीडितले राहत नपाए आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छु
Sindhu Khabar फागुन १५, २०७६ गते १९:०८ मा प्रकाशित
सुकदेव रिसाल (अध्यक्ष)
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३, सिन्धुपाल्चोक
विनासकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी ध्वस्त सिन्धुपाल्चोकमा नै भयो । त्यसमा हाम्रो त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । पूर्ण रुपले सबै घरहरु ध्वस्त भएको थियो । तत्कालीन गाविसमा हाम्रो वडामा पाँच वटा पार्टी प्रतिनिधिको रोहबरमा कामहरु अगाडी बढेका थिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यतिबेला सर्वे गर्न इन्जिनियरहरु गाउँमा पठाएको थियो । जुन सर्वेको आधारमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरुको छनौट भएको थियो । त्यतिबेला छुटेका पीडितहरुका पुर्नजाँच र सर्वेहरु भएका छन् ।
निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष, वडासचिव र इञ्जिनियरहरु खटिएका थिए । त्यसका आधारमा हामीले जो बास्तविक पीडित छन्, जसको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडी बढेका छैनन् । उहाँहरुको नाम लाभगाह्रीको सूचीमा समावेश गराउन हामीले निर्णय गरेर सिफारिस ग¥यौं । अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशिल ज्ञवालीले अन्तरवार्ता र समाचार पढ्दा चैं जनप्रतिनिधिहरुले पुनःसर्वेमा चैं गद्दार गरे । गलत तथ्याङक माथि पठाए भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । हामीले तयस्तो गरेका छैनौं । जो बास्तविक पीडित हो उहाँहरुको मात्र पठाएका हौं । अहिले पुनःसर्वे गरेका पठाएका पीडितहरुको फाइल प्राधिकरणले फालिदिएको छ ।
हाम्रो वडामा एक हजार दुई सय परिवार थिए । अहिलेसम्म एक हजार ६० जना पीडितहरुको मात्रै लाभगाह्रीको सूचीमा नाम अटाएको छ । अझैं एक सय ५० घरधुरी छुटेका छन् । जस्तो कि गुनासोमा फारम भरेका मेरै वडामा १४ जना पीडितहरुको मात्रै गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
उहाँहरुलाई अनुदान दिन सकिएन भने हामी गाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन । अहिले प्राधिकरण जुन गल्ती गरेको छ, त्यसको सिकार हामी जनप्रतिनिधि हुन पुगेका छौं । हामी गाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन् । पीडितहरुले हामीलाई घेर्ने र कुनै हालतमा नछाड्ने अवस्था छ ।
नक्कली पीडितले गर्दा बास्तबिक पीडित मारमा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के भन्यो त ?
मै यहाँ आएर सबै कुरा राखेको छु । मैले यहाँ गरेको कुरा पीडितलाई भन्दा आशावादी हुने अवस्था छैन । म आफै निराशा भएर फर्किँदै छु । अब मन्त्रीपरिषद र प्राधिकरणले ठोस पहल नगरे जनता निराश हुन्छन् । म अब वडामा जाँदा सुरक्षित छैन् । जनताले जतिबेला पनि आक्रमण गर्न सक्छन् । जतिबेला पनि घेराबन्दीमा पर्न सक्छु । हालत यस्तो छ अब जनतालाई के जवाफ दिनु र ? हामी त अझै युवा नै छु । दुइ÷चार जना मान्छे कन्भिस गर्न सक्छु । तर मेरो गाउँपालिकामा ८५ वर्षीय वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले के गर्ने अब ?
मठमन्दिर बनेको छैनन् । गुम्बाहरुको हालत त्यस्तै छ । हामी स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
क्याटेगोरी : ब्लग / विचार, राजनीति